NLD နဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေး အကြား အထင်အမြင်လွဲအောင် ဖန်တီးထားတဲ့ သတင်းအမှား – Nyang Media
NLD နဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေး အကြား အထင်အမြင်လွဲအောင် ဖန်တီးထားတဲ့ သတင်းအမှား
ရဲဇော် / သတင်းအမှားတွင် ဖော်ပြထားသည့် ဓာတ်ပုံ
NLD နဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေး အကြား အထင်အမြင်လွဲအောင် ဖန်တီးထားတဲ့ သတင်းအမှား တစ်ပုဒ်ကို စာဖတ်ပရိသတ်များကို ပြောပြလိုပါတယ်။
သည်သတင်းကို ” နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ကိုဗစ် 19 အပေါ် အနိုင်ရပြီဆိုပြီး တက်မထောင်ပဲ ဂရုစိုက်ရန်ပြောကြားချက်သည် NLD ပါတီအောင်နိုင်ရေး အတွက် မဲဆွယ်လိုက်ခြင်းဟု USDP ပါတီစွပ်စွဲ” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ရဲဇော် အမည်ရ ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်ပိုင်ရှင်က ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်ခိုင်ဖြိုးကို ပုံဖျက်ချင်တဲ့ အဖွဲ့တွေကနေ အုပ်စုဖွဲ့ပြီး သူတို့လုပ်ထားတာကို ပြည်ခိုင်ဖြိုးက လုပ်သလို ဘက်ပြောင်းပြီး ပြည်သူတွေ ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်အောင် လုပ်နေတာပါ။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးက …
ဖော်ပြပါ သတင်းကို မှတ်ချက်ပေါင်း သုံးရာကျော်ပေးခဲ့တာ တွေ့ရပြီး ၊ ပြန်လည် ဝေမျှသူ တစ်ရာကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။ မှတ်ချက် ပေးသူအများစု ဟာ သည် သတင်းကို သတင်းအမှား၊ သတင်းအတု လို့ သိရှိပုံ မရကြပါဘူး။
ရဲဇော် အမည်ရ ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်ပိုင်ရှင်က ဖော်ပြထားတဲ့ သတင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
→ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ကိုဗစ် 19 အပေါ် အနိုင်ရပြီဆိုပြီး တက်မထောင်ပဲဂရုစိုက်ရန် ပြောကြားချက်သည်NLDပါတီအောင်နိုင်ရေး အတွက် မဲဆွယ်လိုက်ခြင်းဟု USDP ပါတီစွပ်စွဲ
နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ကိုဗစ် 19 အပေါ်အနိုင်ရပြီဆိုပြီး တက်မထောင်ပဲဂရုစိုက်ရန် ပြောကြား ချက်သည် NLD ပါတီအောင်နိုင်ရေး အတွက် မဲဆွယ်လိုက်ခြင်းဟု USDP ပါတီစွပ်စွဲပြစ်တင်လိုက်ပြီး ကိုဗစ် ရောဂါကို ခုတုံးလုပ် မဲဆွယ်နေခြင်းသည် အောက်တန်းကျ သော မဲဆွယ်နည်းဖြစ်သည်ဟု ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးသိန်းထွန်းဦးမှ စွပ်စွဲပြောကြားလိုက်သည်။
ကျွန်တော် တို့မဲမဆွယ်ရသေးဘူး ခုမှပြင်ဆင်နေတုန်းပဲ ရှိသေးတယ်။ သူတို့ကတော့ အခွင့်ထူးခံတွေလို စပြီး မဲဆွယ်နေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ပါတီ မဲဆွယ်ရင် လူသူအများ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ရတဲ့ရောဂါနဲ့ မဲမဆွယ်ဘူး။ အမျိုးသားရေး ဝါဒကို အခြေခံပြီး လူထုယုံကြည်မှု့ကိုပြန်ရအောင်လုပ်ပြီး အာဏာပြန်ယူပြမယ်။
ပြိုင်မဲ့နေရာတိုင်းကို အနိုင်မခံ အရှုံးမပေးတဲ့စိတ်ဓါတ်နဲ့ မလိမ်မညစ်ပဲနိုင်အောင်ယှဉ်ပြိုင် သွားတော့မယ်လို့ ပြည်သူကို ဂတိကဝတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ၂၀၂၀မှာ ဘယ်ပါတီက မဲခိုးပါတီဖြစ်လာမလည်းဆိုတာ ပြည်သူတွေမြင်လာကြရပါလိမ့်မယ် ။
#သိန်းထွန်းဦး #ကိုဗစ်. #မဲခိုးပါတီ
W . M ??
ရဲဇော်အကောင့်ပိုင်ရှင် ဖော်ပြထားတဲ့ သတင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ငြမ်းမီဒီယာ က သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ဆက်သွယ် မေးမြန်း၊အချက်အလက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ ဖော်ပြပါ သတင်းသည် သတင်းအမှား သာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၏ ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးသိန်းထွန်းဦး က ငြမ်းမီဒီယာ ကို ပြောပါတယ်။
“ ရဲဇော်ဆိုတဲ့ Account က တင်တယ်ဆိုရင်တော့ သတင်းတုပဲ။ ရဲဇော်က ဒီလိုပဲ စွပ်စွဲပုတ်ခတ်တဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်နေတာ။ ကျနော်တို့ ပါတီက ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေ၊ ပါတီဥက္ကဌ ကြီးတွေ မပြောတဲ့ဟာကို ပြောပါတယ်ဆိုပြီး ပုံဖျက်ပြီးရေးတဲ့ အနက်ရောင် ဝါဒ ဖြန့်ချိရေး လုပ်နေတာ အဲဒီ ရဲဇော်ဆိုတဲ့ Account ပဲ။ အခုဒီကိစ္စကလည်း ကျနော်တို့ လုံးဝပြော မထားတဲ့ ကိစ္စပါ။ သတင်းအမှား ဖြစ်ပါတယ်။ ” လို့ ဦးသိန်းထွန်းဦးက ပြောပါတယ်။
ရဲဇော် လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ အကောင့်ပိုင်ရှင်မှာ Followers ၁၇၀၀ နီးပါး ရှိပါတယ်။
ဒီကာလမှာ သတင်းတု၊ သတင်းမှားလုပ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း တွေကို အစိုးရအနေနဲ့ တရားဥပဒေနဲ့အညီ ဖော်ထုတ် အရေးယူဖို့ လိုတယ်လို့လည်း ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၏ ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့် က ငြမ်းမီဒီယာ ကို ပြောပါတယ်။
နိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်မှုဖြစ်စေဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ငွေပုံ အောပေးပြီး သတင်းအမှား ဖြန့်နေသူတွေ နေပြည်တော် အသိုင်းအဝိုင်း မှာရှိနေတယ်လို့ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူက ပြောကြားထားပါတယ်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရဲ့ အထက်ပါ သတင်းစကားအပေါ်အခြေတည်ပြီး ငွေပုံအောပေးပြီး သတင်းအမှား ဖြန့်နေ သူတွေဟာ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ လို့ ကောက်ချက်ချ ထင်မြင်ယူဆနေသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
“ ထင်မြင်ယူဆချက်မျိုးဆိုရင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးကို ပုံဖျက်ချင်တဲ့ အဖွဲ့တွေကနေ အုပ်စုဖွဲ့ပြီး သူတို့လုပ်ထားတာကို ပြည်ခိုင်ဖြိုးက လုပ်သလို ဘက်ပြောင်းပြီး ပြည်သူတွေ ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်အောင် လုပ်နေတာပါ။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးက လုပ်စရာ အကြောင်းအရင်း လည်း မရှိဘူး။အစိုးရလည်းမဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့က ရိုးရိုးသားသားနဲ့ အသန့်ရှင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ယှဉ်ပြိုင်သွားမယ်။ ကျန်တာကတော့ အစိုးရအနေနဲ့ လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တာကို ဥပဒေနဲ့အညီဖော်ထုတ်အရေးယူနိုင်ဖို့ လိုတယ်။ဖော်ထုတ်ပြီးတော့လေ။ဒါတွေက အစိုးရ အနေနဲ့ လုပ်မှလည်းဖြစ်မယ့်ကိစ္စတွေကို။အစိုးရကိုယ်တိုင်က စွပ်စွဲနေတာမျိုးကတော့ မဖြစ်သင့်ဘူး လို့ဘဲ မြင်တယ်။ အစိုးရ ဖော်ထုတ် ရမှာ။အစိုးရလုပ်ကိုလုပ်ရမှာ။အစိုးရဖော်ထုတ်၊ အစိုးရအရေးယူ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်က အစိုးရလက်ထဲမှာ ရှိတာကို။” လို့ ကြံံ့ခိုင်ရေး ပါတီရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ ဒေါက်တာ နန္ဒာလှမြင့်က ငြမ်းမီဒီယာကို ပြောပါတယ်။
ဘယ်ပါတီမှ နိုင်ငံပျက်အောင်တော့ လုပ်ကြမှာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီတော့ တရားသောနည်းနဲ့ အနိုင်ရရှိအောင်ပဲ ကြိုးစားသင့် တယ်လို့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၏ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ ဦးသိန်းထွန်းဦးက ငြမ်းမီဒီယာ ကို ပြောပါတယ်။ …
သတင်းအမှားတွေကို စနစ်တကျကွန်ရက်ဖွဲ့ပြီး ဖြန့်ချိနေတာ တွေကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့ ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ လည်း သမ္မတရုံး က သတိပေးထားပါတယ်။
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ က ထုတ်ဝေနေတဲ့ မီဒီယာမှာ ပြည်ထောင်စုနေ့စဉ်သတင်းစာ တစ်ခုပဲရှိတယ်လို့ ဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့် က ဆိုပါတယ်။
ရဲဇော် ဆိုတဲ့ အကောင့်ပိုင်ရှင်ကို အရေးယူနိုင်တဲ့ အဆင့်ဖြစ်အောင် လုပ်ရတော့မယ့် သဘောဖြစ်နေတယ်လို့ ဦးသိန်းထွန်းဦး က ဆိုပါတယ်။
ပါတီဆိုတဲ့ဟာက ဘယ်ပါတီမှ နိုင်ငံပျက်အောင်တော့ လုပ်ကြမှာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီတော့ တရားသောနည်းနဲ့ အနိုင်ရရှိအောင်ပဲ ကြိုးစားသင့်တယ်လို့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၏ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ ဦးသိန်းထွန်းဦးက ငြမ်းမီဒီယာ ကို ပြောပါတယ်။
Tags: factcheck, NLD, usdp, သတင်းတု, သတင်းအမှား
ဦးကိုနီ ၊NLD နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမည် သုံးပြီး သတင်းအမှား ဖြန့်
” ဝ ” မှာ ငွေစက္ကူ ထုတ်နေပြီ ဟူသော သတင်းမှား ဖြန့်ချိ